नारीवादी दृष्टान्तहरू जसले सडक र सञ्जालहरूलाई तिनीहरूका सन्देशहरूले भर्छन् | अनलाइन क्रिएटिभहरू
नारीवादी दृष्टान्तहरू जसले सडक र सञ्जालहरू आफ्ना सन्देशहरूले भर्छन्
आइरिस गेमन | 29/03/2022 22:12 | प्रेरणा
चैत ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस; जहाँ धेरै सडकमा उत्रिए आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक समानता मात्र होइन, सामाजिक समानताको पनि माग गर्ने । आफ्नो आवाज उठाउन को लागी, जो अब गर्न सक्दैनन्, भन्न को लागी कि तिनीहरू त्यहाँ छन्, सबै बाधाहरू विरुद्ध र तिनीहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्।
La नारीवादी आन्दोलनको दृश्यता, सबै सान्दर्भिक मुद्दाहरूमा आवाज दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन महिलासँग सम्बन्धित छ । 8 मार्च, यो एक दिन हो जसमा हामी कलालाई कसरी नारीवादी आन्दोलनलाई पखेटा दिन प्रयोग गरिन्छ भनेर देख्न सक्छौं।
आज हामी यस बारे कुरा गर्न जाँदैछौं, नारीवादी दृष्टान्तहरू, जसले समाजको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू प्रसारण गर्न सेवा गरेको छजनताका लागि मात्र होइन, देशका उच्च अधिकारीहरूका लागि पनि। थप रूपमा, हामी नारीवादी चित्रकारहरूको नाम दिनेछौं जुन तपाईंले जान्नुपर्छ र सन्दर्भको रूपमा हुनुपर्छ।
1 नारीवादी चित्रण
2 फेमिनिस्ट इलस्ट्रेटरहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्छ
2.1 लोला वेन्डेटा
2.3 आधुनिक गाउँ
2.4 फ्लेविट केला
2.5 इसाबेल रुज
2.6 इसाबेल मुगुरुजा
2.7 रोसियो सालाजार
La महिला अधिकारको प्रत्याभूति, विभिन्न तरिकाले बोक्न र व्यक्त गर्न सकिन्छ, श्रृंखला, चलचित्र, चित्रण, संगीत, कपडा, आदि मार्फत। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई केही उत्कृष्ट नारीवादी दृष्टान्तहरू देखाउन जाँदैछौं जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न।
महिला आवश्यक छ, उनी भन्छन् Patricia Bolaños यस दृष्टान्तमा clenched Fists up को प्रतिष्ठित प्रतीकको साथ। र तपाइँ सहि हुनुहुन्छ, यो भनाइ संग, महिलाहरु आवश्यक छन्, महिलाहरु एक अर्कालाई समर्थन, एक अर्कालाई प्रेरणा, एक अर्कालाई सहयोग, हाम्रो पखेटा खोल्नुहोस् र त्यहाँ कोही छैन जो रोक्दैन।
मा नारीवादी आन्दोलन हामी सबै फिट छौं र हामी सबै लड्छौं, संग संगै। लडाई जारी छ, किनकि अझै धेरै लामो बाटो छ। हामी एमेली टोरेस, बी फर्नान्डेज र आना जेरेनका यी दृष्टान्तहरूमा देख्न सक्छौं, महिलाहरू बीचको संघर्ष र एकताको अनुभूति।
हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा वा 8M प्रदर्शनहरूमा पनि फेला पार्ने धेरै दृष्टान्तहरूले संचारको एक रूपको रूपमा व्यंग्य र हास्यको प्रयोग गर्दछ। र जीवनका निश्चित परिस्थितिहरूमा महिलाहरूले अनुभव गरेका समस्याहरूसँग असहमति देखाउन।
हामी तपाईलाई सञ्जाल, स्पेगेटी मोन्स्टर, रोसियो सालाजार, आर्टे म्यापाचे, र क्लेरिलो, अन्य धेरै चित्रकारहरूमा साझा गरिएका उदाहरणहरू छोड्छौं।
हामी बस्ने समाजलाई प्रत्यक्ष सन्देशसहितका ती दृष्टान्तहरू बिर्सन सक्दैनौं, हुनसक्छ तिनीहरू चित्रकारहरूबाट होइनन् जुन हामीले थाहा पाउन सक्छौं, किनकि तिनीहरू व्यक्तिगत सिर्जनाहरू हुन्, तर सन्देश धेरै स्पष्ट छ, हामी सबैको बीचमा सम्मान, एउटै बाटो पछ्याउन, समानताको लागि लडाइँ।
हर्मियोनी नारीवादी चित्रण
दृष्टान्त, भोलि मर्नको लागि आज लड्नुहोस्
फेमिनिस्ट इलस्ट्रेटरहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्छ
यदि हामीले 8M दावी गर्ने प्रत्येक नारीवादी दृष्टान्तहरू सङ्कलन गर्न थाल्यौं भने, हामी कहिल्यै समाप्त हुने छैनौं, र त्यो राम्रो सङ्केत हो। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई उठाउन जाँदैछौं केही चित्रकारहरू जसले आफ्नो काम मार्फत नारीवादको काम गर्छन्।
कलाकार रक्वेल रिवा, जो हुन् एक सशक्त महिला लोला वेन्डेटाको चरित्रलाई जीवन दिएको छ। क्याटालान चित्रकार ReEvolución Feminina को सह-संस्थापक हुनुहुन्छ, एउटा आन्दोलन जसले महिलाहरूलाई समाजमा उनीहरूलाई योग्य स्थान दिने उद्देश्य राख्छ।
उहाँका दृष्टान्तहरूमा हामी पाउँछौं भिग्नेट जसमा उनी महिला समानताको लागि लड्छिन् राम्रो रेखा रेखाचित्र र बलियो सन्देशहरू मार्फत।
जोन बेन्गोआ, महिला जो नारीवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्छ, पितृसत्ताको विरुद्धमा लड्छ र समाजमा थोपाएका सिद्धान्तहरू तोड्छ जसमा हामी बस्छौं। यसले महिलालाई आफ्नो निर्णय आफै गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणाको रक्षा गर्छ।
यी सबै सन्देशहरू उहाँको इन्स्टाग्राम खातामा सङ्कलन गरिएका कामहरू मार्फत जारी गरिएको छ, sastraka, बास्क शब्द झारलाई बुझाउन प्रयोग गरिन्छ। उसले यो विचारलाई घुमाउँछ यी झारहरू एक ठाउँ र समयमा जन्मिएका हुन् भनेर जो चिन्ह लगाइएको छ त्यसलाई तोड्न, नियमहरू तोड्नको लागि।.
Raquel Córcoles Moderna de pueblo पछि कलाकार हुन्। तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा पोष्टहरूमा, द चित्रकारले नारीवादी आन्दोलनलाई आवाज दिनका लागि आफ्ना चित्रहरू प्रयोग गर्छिन्, लगभग सधैं हास्यसँग खेल्छिन्.
उहाँको पुस्तक, इडियटाइज्ड: ए टेल अफ एम्पावर फेयरीज, हामीलाई शहरमा बस्ने यसका पात्रहरूको अनुहार देखाउँदछ जहाँ तपाईंले वाक्यांशहरू सुन्नुहुन्छ, जुन युवतीको सामान्य होइन वा तपाईंले विवाह गरेको दिन तपाईंको जीवनको सबैभन्दा खुशीको हुनेछ। जब तिनीहरू ठूलो शहरमा सर्छन्, तिनीहरूले अरूलाई भेट्छन् पात्रहरू जसले तिनीहरूलाई आफ्नो आँखा खोल्छ र तिनीहरू वास्तवमै के योग्य छन् भनेर जान्न थाल्छन्.
स्पेनिश चित्रकार, कार्टुनिस्ट र कार्टुनिस्ट, फ्लाभिया अल्भेरेज पेड्रोसा, फ्लाविटा केला भनेर चिनिन्छ। हाम्रो देशमा सबैभन्दा प्रभावशाली चित्रकारहरू मध्ये एक.
कालो र आरामको रूपरेखाको रेखाचित्रको साथ, तिनीहरू हामीसँग प्रेम, उदासी, जटिलता, समाजसँगको असुविधा, आदि जस्ता विषयहरूको बारेमा कुरा गर्छन्।। उसको संसारको दर्शन र कसरी उसले हास्यको माध्यमबाट प्रसारित गर्छ, कसैलाई उदासीन छोड्दैन।
यस अवस्थामा हामी इसाबेल रुइजको बारेमा कुरा गर्दैछौं, बालबालिका र युवा साहित्य दुवैका चित्रकार र लेखक, महिलाको आकृतिलाई आवाज र दृश्यता दिने मिशनको साथ। आफ्नो प्रकाशन, Mujeres, जसमा पाँच प्रतिहरू छन्, उनले महिला पात्रहरूको प्रशंसा गर्छन् जसले इतिहासमा महत्त्वपूर्ण क्षणहरू चिन्ह लगाउँछन्।
उनको इन्स्टाग्राम खातामा, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ महिलाहरूको आकृतिको बारेमा प्रतिशोधात्मक सन्देशको साथ चित्रहरू। एक रंगीन, वास्तविक र स्त्री ब्रह्माण्ड चित्रण शैली संग। परिवर्तनशील ब्रह्माण्ड, कहिलेकाहीं पेस्टल रङहरू, कहिलेकाहीं फ्लोरिन, चमक वा साइकेडेलिक सेटिङहरू।
उनको लागि कलाको काम पछाडि कलाकार भन्दा महत्त्वपूर्ण छ।, किनकी यो काम संग छ कि दर्शकहरु एक जडान सिर्जना गर्दछ।
द्वारा विडंबनाको प्रयोग, Rocío Salazar, धेरै महिलाहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई सञ्चार र दृश्यता दिन्छ।। यस कलाकारको लागि, त्यहाँ एक महिलाको मात्र प्रोटोटाइप छैन, उनको लागि तिनीहरू सबै मान्य छन्।
यो महिलाको दाढी नगर्ने निर्णयलाई सन्दर्भ गर्ने दृष्टान्तहरूबाट सुरु भयो, र त्यहाँबाट तिनीहरूको संख्या उठ्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँका अनुयायीहरू द्वारा चित्रण धेरै राम्रोसँग प्राप्त भयो।
एक वास्तविक महिला को लागी झूट, उनको पुस्तकहरु मध्ये एक हो, जहाँ उनले रोमान्टिक प्रेम को बारे मा विडंबनापूर्ण बोल्छ, जुन सबै महिलाहरु लाई जीवन मा एक लक्ष्य को रूप मा मानिन्छ। र उसले यो धेरै स्पष्ट पार्छ, सबै महिलाहरूले लैङ्गिक स्टिरियोटाइपको साथ पहिचान गर्दैनन् र लागू गरिएको सामाजिक मान्यताहरू पालना गर्दैनन्।
यी हाम्रो वरिपरि रहेको नारीवादी आन्दोलनको बारेमा सबै कलाका केही उदाहरणहरू मात्र हुन्, तर इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचुर मात्रामा। छन् कार्यहरूले भाइचारा, संघर्ष, स्वतन्त्रता र क्रान्तिको लागि प्रोत्साहनको सन्देशहरू सङ्कलन गर्दछ जुन पहिले नै चलिरहेको छ। महिला बिना, संसार रोकिन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » नारीवादी दृष्टान्तहरू जसले सडक र सञ्जालहरू आफ्ना सन्देशहरूले भर्छन्
नि: शुल्क इलस्ट्रेटर ब्रश सेट